Gary Neville oo sheegay in liverpool ay Lumisay Hanaankeedii.
Home Horyaalka Ingiriiska Gary Neville oo sheegay in liverpool ay Lumisay Hanaankeedii.
Ka dib markii Liverpool ay soo gaartay guuldaradoodii 7aad ee xilli ciyaareedkii Premier League, Gary Neville ayaa ku tilmaamay ciyaartoydii Reds inay lumiyeen Awoodii iyo kalsoonidii garoonka dhexdiisa.
Everton ayaa guushii ugu horeysay ku gaartay Anfield markii ay ka badiyeen Liverpool muddo 22 sano ah, taasoo cadaadis dheeri ah ku heysa Jurgen Klopp, iyadoo Reds ay haatan ka baxday afarta koox ee ugu sareysa Premier League, isla markaana qatar weyn ugu jirta inay ka maqnaato Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
Neville ayaa ku sheegay Sky Sports Podcast.
Waan ognahay inaysan helin taageerayaal garoonka dhexdiisa, waxaan ka ognahay COVID halkaasna ciyaaro badan, laakiin waa isku mid qof walba. Laakiin waa isbadal la’aanta. Fikrad ka duwan.
Kaliya waxay u muuqdaan kuwo la garaacay, oo u eg zombies garoonka dhexdiisa. Socodka hareeraha fikirka.
Waxaa laga yaabaa inay u baahan tahay wax ka duwan Klopp? Waxa uu ahaa nin si fudud aan loo dulqaadan karin welina wuxuu ku sii jeedaa Liverpool laakiin xitaa waxaa laga yaabaa inuu hadda ka fikirayo: ‘Ma inaan sameeyaa wax ka duwan?’
Aniga aniga ilama ahan inaan kula taliyo Liverpool ama Klopp waxa la sameeyo laakiin inaan ciyaaro sanduuq si aan u ilaaliyo daafacyadaada dhexe ama laga yaabo inay seddex gadaal gadaal u socdaan. Waxaan aragnay kooxo kale oo tagaya nidaamkaas.
“Laakiin aniga waxay ila tahay inay u baahan yihiin fikrad cusub si ay u siiyaan iftiin ama waxay u noqon kartaa xilli niyad jab leh halka aysan u qalmin Champions League, in kastoo aan weli u maleynayo inay sidaas sameyn doonaan.
Previous articleParis saint chermain oo markale soo cusbooneysiisay Xiisihii Hector Bellerin.
Next articleReal madird oo wili ugu cad cad Saxiixa david Alaba xilli Kroos uu ka hadlay Arinta.